‘‘माफी आवश्यक छैन तर म आफैँलाई माफी दिन सक्छु,’’ – USNEPALNEWS.COM
‘‘माफी आवश्यक छैन तर म आफैँलाई माफी दिन सक्छु,’’
जे भए पनि मुलरको अनुसन्धान अगाडि बढेको छ, यदि कुनै ऐतिहासिक नजिर स्थापना भयो भने सदा झैँ अदालतले पनि न्युनतम रूपमा केही प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यी प्रश्नमा के एउटा राष्ट्रपतिलाई अधिवक्ताको प्रश्नको उत्तर दिन बाध्य पार्न सकिन्छ ? के एउटा सेना प्रमुखले अनुसन्धानमा आपराधिक रूपमा हस्तक्षेप गर्ने कुरा सम्भव हुन्छ ? के एउटा राष्ट्रपतिको माफी दिने अधिकारको विस्तार भ्रष्टाचारको उद्देश्यमा पनि उपयोग हुनक्छ ? भन्ने प्रश्न समावेश हुन्छन् ।
सन् २०१६ को निर्वाचनका समयमा के ट्रम्पका सहयोगीले रसियासँग समन्वय गरे ? र एफबीआईका निर्देशक जेम्स कोमीलाई बर्खास्त गर्नुसहितका कार्यबाट के ट्रम्पले अनुसन्धान बन्द गर्न पाइला चाले ? भन्ने कुरामा मुलरले अनुसन्धान गरिरहनुभएको छ ।
ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता सरा हकबी स्यान्डर्सलाई सोमबार के राष्ट्रपति कानुनभन्दा माथि हुनुहुन्छ ? भनी पटकपटक सोधिएको प्रश्नमा उहाँले ‘‘होइन, उहाँ हुनुहुन्न’’ भन्नुभयो ।
होलीको उमंग : पांच तस्बिरमा कोलराडोको होली